चितवनमा ७४ वर्षका क्यान्सर बिरामीले कोरोना जितेर घर फर्कीए | PBM News.com
चितवनमा ७४ वर्षका क्यान्सर बिरामीले कोरोना जितेर घर फर्कीए
चितवन,५ असार । चितवनमा फोक्सोको क्यान्सरका बिरामी ७४ वर्षीय बृद्धले कोरोना जितेका छन् । उनी शुक्रबार भरतपुर अस्पतालको आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज भएका हुन् । विहीबार गरिएको परीक्षणमा उनिहरु दुवैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि शुक्रवार भरतपुर अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो ।
भरतपुर महानगरपालिका– ६ का वृद्धको उपचारमा संलग्न भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. प्रमोद पौडेलले ७४ वर्षका फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित वृद्ध कोरोना संक्रमणबाट निको हुनु खुसीको खबर भएको बताए । फोक्सोको क्यान्सरको उपचारका लागि छोरासँग भारत गएका वृद्धमा गत जेठ ९ गते कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
उनकी ७३ वर्षकी श्रीमतीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । उनले श्रीमतीसँगै झण्डै एक महिना भरतपुर अस्पतालमा बसेर उपचार गराएका थिए । श्रीमान् श्रीमती दुवैजना कोरोना भाइरस संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भएको अस्पतालका चिकित्सक डा. पौडेलले बताए । क्यान्सर रोगी वृद्धले पाँचपटक केमोथेरापीसमेत लिएका थिए । उनको एक पटकको केमोथेरापी बाँकी छ । केमोथेरापी लगाउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यस्तो बेला अन्य रोगको समेत संक्रमणको खतरा हुन्छ ।
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका वरिष्ठ थोरासिक सर्जन डा.विनय ठाकुरले फोक्सोका क्यान्सर रोगी वृद्धले कोरोना जित्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताए । संक्रमति वृद्धवृद्धाका छोरा यसअघि नै डिस्चार्ज भइसकेका छन् । शुक्रबार वृद्धलाई अस्पतालले फूल दिएर बिदाइ गरेको थियो । त्यस क्रममा वृद्धले कोरोनासँग संघर्ष गर्न आफ्नो मनोबल उच्च बनाउन आग्रह गरे ।
महोत्तरीका दुई बस्तीमा १० दिनका समयमा ११ जनाको मृत्यु विषाक्त मदिराको कारण हुन सक्ने अनुमान
बर्दियामा समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि निषेधाज्ञा जारी
लक डाउन बढेसँगै चोरीका घटनाहरु बढन थाल्यो / रत्ननगरमा मोबाइल पसलमा चोरी
खैरहनीकाे कृषि सहकारीले चर्काे मूल्यमा मल विक्री गर्दै
कोरोनाको कारण खाडीका ६ देश र मलेसियाबाट ४ लाख नेपाली स्वदेश फर्किन सक्ने